दुर्घटना : सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मानवीय त्रुटि
(नेपालको हवाई इतिहासमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू उत्तिकै भइरहेका छन् । कैयनको जीवनलीला यही हवाई दुर्घटनाले समाप्त पारिदिएको छ । भर्खरै मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित विभिन्न प्रतिष्ठित ७ व्यक्तिको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ज्यान गयो । यो दुर्घटनासंगै नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अनेक प्रश्न उठाइएको छ । के नेपालको आकाश सुधार्नै नसक्ने गरी असुरक्षित बन्दै गएको हो ? बारंबार भइरहेका दुर्घटनाका कारणहरू के के हुन् ? हवाई क्षेत्रको नियामककारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवानन्द उपाध्यायसंग हामीले यिनै जल्दाबल्दा प्रश्नहरूको वरिपरि रहेर कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० कहालीलाग्दा हवाई दुर्घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । भर्खरै मात्र पनि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जना विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको हेलिकप्टर दुर्घटनाकै कारण ज्यान गयो । नेपाली आकाश अलि बढी नै असुरक्षित बन्दै गएको हो ?
–हो, केही दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् । यसलाई शून्यमा झार्न कहीँ पनि सकिन्न । तर, यसको मतलब नेपाली आकाश असुरक्षित नै भयो भन्ने होइन ।
० तपाईंले आकाश सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि दुर्घटनाका तथ्यांकहरूले त असुरक्षित रहेको देखाउँछ नि होइन र ?
–दुर्घटनाका एउटै कारण हुँदैनन्, धेरै फ्याक्टर हुन्छन् । त्यसैले आकाशलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । विभिन्न कारणहरूले दुर्घटनाको रुप लिइरहेको छ ।
० आकाश असुरक्षित भएर भन्दा पनि अन्य कारणहरूले दुर्घटना भएको निष्कर्ष तपाईंको देखियो । त्यस्ता कारणहरू के–के हुन् जसले दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् ?
–भौगोलिक बनावट, मौसम, यान्त्रिक गडबडी र मानवीय त्रुटि नेपालका हवाई दुर्घटनाका कारणहरू हुन् । यिनमा पनि दुर्घटनाका कारण, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मानवीय त्रुटि देखिँदै आएको छ ।
० अहिलेसम्मका दुर्घटना केलाउँदा मानवीय त्रुटि बढी देखिन्छन् भन्नुभयो । दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिले पनि यस्तै निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । त्यस्ता मानवीय त्रुटिहरू के के हुन् ?
–कुनै अवस्थामा चालक दलका सदस्यहरू निकै दबाबमा हुन्छन् । नाइँ भन्न सक्दैनन् । यसले पनि कैयन दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न विभिन्न नियम तथा कार्यविधिहरू बनाएको हुन्छ । कतिपय बेला उडानका नियम तथा कार्यविधिहरू पालना नगर्दा पनि दुर्घटना निम्तिरहेको छ । यसले थप गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
० दुर्घटनाका कारणहरू अरु नै भए पनि जोगिन या आफ्नो एयरलाइन्सको साख जोगाउन मरिसकेका चालक दलका सदस्यहरूलाई दोष थोपर्ने गरिन्छ भनिन्छ नि ?
–यदाकदा त्यस्ता कुराहरू सुनिन्छन् । तर, यो आरोप सत्य होइन । ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएका कुराकानीलगायतका अन्य तथ्यहरू केलाएर त्यस्ता निकर्ष निकालिने भएकाले यसमा शंका गर्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० मौसमले पनि दुर्घटनाको दर बढाइरहेको भन्नुभयो । मौसमको समस्या किन यस्तो पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ?
–भीएफआर (भिजुअल फ्लाइट रुट) आँखाले देख्ने अवस्थामा उडान गर्नुपर्छ । यदि मौसमका कारण भीएफआर क्लियर छैन भने त्यस्तो अवस्थामा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यो पढाइएको तथा सिकाइएको पनि हुन्छ । विभिन्न ट्रेनिङहरूमा पनि भनिएको हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो ।
० यसको मतलब भीएफआरबारेको कार्यविधि र नियम पालनामा पनि त्यति गम्भीर नहुने प्रचलन हाम्रो उड्डयन क्षेत्रमा छ ?
–हामीले बनाएको नियमहरू इन्कार गरेर कोही इनरुटमा जान्छ भने त त्यसको परिणाम गलत नै आउँछ । त्यसैले मैले अघि भनेजस्तो उडानका कार्यविधि तथा नियमहरूको पालनामा हेलचेक्रयाइँ गरेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन् । दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन् ।
० नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण एउटै रुटमा पनि मौसम फरक हुने र त्यसले पनि आकाशलाई असुरक्षित बनाएको भनिन्छ नि ?
–हो, मौसममा छिनमै फेरबदल आउने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले हामीले भीआरएफ क्लियर नभएको अवस्थामा फर्किने नियम पनि बनाएका छौं । लामो रुटमा जस्तै काठमाडौंबाट विराटनगर जाँदा बीचको मौसममा आकष्मिक रुपमा आउने बदलाव ठम्याउन सकिन्न । यस्तो बेला उडानलाई अघि बढाउनबाट रोकेर फर्किने कि अन्य सुरक्षित विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार चालक दलका सदस्यलाई दिइएको हुन्छ ।
० क्षमताभन्दा बढी तौल बोकाउने र पाइलटहरूलाई जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालमा अलि बढी छ भनिन्छ । यस्तै हो ?
–नेपालगञ्जबाट सिमिकोट या बाजुरा लैजानु प¥यो भने १ केजीमा करीब करीब १ सय रुपैयाँ फरक पर्छ । त्यसैले रेटले पनि विशेष गरेर दुर्गम क्षेत्रका उडानहरूलाई प्रभावित बनाएको साँचो हो । म आफैं पनि फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट (उडान सुरक्षा मापदण्ड विभाग)को निर्देशक हुँदा विभिन्न समयमा छड्के गरेको थिएँ । यसक्रममा नियम उल्लंघन गरेको भेटिएपछि कारबाहीसमेत गरिएको थियो ।
० यस्ता गम्भीर समस्याहरू रहेछन् । त्यस्ता समस्या रोक्नचाहिँ तपाईंहरू किन नसक्या ?
–खासगरी दुर्गम क्षेत्रको हवाई उडानमा बढी तौल बोक्ने समस्या छ । यसलाई रोक्न हामीले प्रयत्न नगरेका होइनौं, गरिरहेका छौं । रोक्दा रोक्दै पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता प्रवृत्ति देखापर्छन् । तर अहिले यस्ता प्रवृत्तिमा निकै नै सुधार आएका छन् । नेपालभर जति विमानस्थल छन्, तिनका प्रमुखहरूलाई नै कानूनहरूले नियमन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । उहाँहरूले हेरिरहनु भएको पनि छ । तर यसमा विमानका चालक क्याप्टेनदेखि यसका चालक दलका सदस्य नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।
० तर, विमानस्थलका प्रमुख, चालक दल सदस्यहरूकै मिलेमतोमा बढी तौल बोक्ने परम्परा छ भनिन्छ नि ?
–होइन, यसमा हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । सम्भावित क्षतिलाई हेरेर हामीले सचेतता अपनाइरहेका हुन्छौं ।
० चलिरहेका जहाजहरूको यान्त्रिक परीक्षणको अवस्थाचाहिँ नेपालमा कस्तो छ ?
–नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठन (आईकाओ)को सदस्य राष्ट्र हो । आईकाओले यसका सदस्य राष्ट्रहरूका लागि विभिन्न कार्यविधि तथा नियमहरू बनाएको छ । हामी सदस्य राष्ट्र भएकाले त्यसको नियम पालना गर्नुपर्छ ।
० गर्नुपर्छ मात्रै कि गरिरहेका पनि छांै त ?
–आईकाओले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । बरु हामीले आफ्नो मौलिकता अनुरुप हवाई उडानलाई सुरक्षित पार्न विभिन्न नियम–कानूनहरू बनाएका छौं । पाइलट, इञ्जिनियर, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर सबैको योग्यता परीक्षण गरेर लाइसेन्स दिने काम पनि गरिरहेका छौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जसरी एउटा डाक्टरलाई लाइसेन्स दिन्छ, हामीले पनि ठीक त्यसैगरी एयरलाइन्समा काम गर्ने इञ्जिनियरहरूलाई लाइन्सेन्स दिने गरेका छौं । जहाजको यान्त्रिक अवस्था के छ भनेर परीक्षण गर्ने काम उहाँहरूकै हो । र, नेपालभित्र रहेका सबै एयरलाइन्सहरूले यस्ता इञ्जिनियरहरूको व्यवस्था पनि गरेका छन् । यतिले मात्रै पुग्दैन कि भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैंले पनि बेला परीक्षण गर्दै आएको छ ।
० तपाईंहरूले नियम बनाए पनि यसको कार्यान्वन पक्ष अलि फितलो भयो । एयरलाइन्सहरूले परिपालना गर्न आनाकानी गरे भनिन्छ नि ?
–यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ म देख्दिनँ । आईकाओले उडान सुरक्षा, कानून, संस्थालगायतको मिहीन ढंगले अडिट गर्छ । यो अडिटमा विश्वको औसतभन्दा नेपाल माथि छ । यसले नै नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्था के छ भन्ने देखाउँदैन र ? म यहाँनिर के कुरा पनि जोड्न चाहन्छु भने हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, तर शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसैले हामी न्यून गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं । भर्खरै स्वर्गीय हुनु भएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि हवाई सुरक्षाबारे बढी नै चिन्तित हुनु भएको थियो ।
० हवाई सुरक्षाबारे उहाँको धारणा के थियो ?
–हवाई दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । हामी कहाँ–कहाँ चुकेका छौं त्यो पत्ता लगाएर हवाई यात्रालाई सुरक्षित पार्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । बारबार हामीलाई झक्झकाइ रहनु भएको थियो । हामी पनि कमजोरी सुधारेर हवाई यात्रालाई सुरक्षित पार्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौं ।
० हरेक दुर्घटनापछि हामीले छानबिन समिति गठन गर्छौं । त्यसले प्रतिवेदन पनि दिन्छ । तर, फेरि उस्तै प्रकृतिका दुर्घटनाहरू हुन्छन् । एउटै समस्या किन बारबार किन आइरहेको छ ?
–तपाईंले भनेजस्तै आम जनमानसमा यस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा दुर्घटनापछि छानबिन गर्नैपर्छ । यसको उद्देश्य भावी दिनहरूमा एउटै समस्या नदोहोरिउन् भन्ने नै हो । त्यही अनुरुप छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप करेक्सनका काम पनि भइरहेका हुन्छन् । तैपनि हवाई उडानमा अपेक्षित प्रगति हासिल भएको छैन । यतातिर गम्भीर भएर हामीले सोच्ने अवस्था जरुर छ ।
० निजी तथा सरकारी एयरलाइन्सहरूको व्यापारिक स्वार्थ छानबिनका क्रममा हाबी हुने र त्यसको छायाँमा परेर तथ्यलाई नै बंग्याइने गरिएको आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । सत्यता यस्तै हो ?
–यसमा मलाई सत्यता लाग्दैन । किनभने हरेक जहाजमा ब्ल्याकबक्स हुन्छ । ब्ल्याक्सबक्समा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ । एउटा ककपिट भ्वाइस रेकर्डर । अर्को, फ्लाइट डाटा रेकर्डर । भ्वाइस रेकर्डरमा ककपिटमा पाइलटले कुरा गरेको कुरा रेकर्ड गरेको हुन्छ । फ्लाइट डाटा रेकर्डरले एयरक्राफ्टको हरेक क्षणको नोट गरेको हुन्छ । यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै दुर्घटनाको प्रतिवेदन दिइने भएकाले व्यापारिक स्वार्थको छायाँ यसमा पर्ने सम्भावना हुँदैन । फेरि उड्डयन क्षेत्रमा कहलिएका व्यक्तिहरूलाई राखेर समिति गठन गरिने भएकाले यसमा प्रश्न उठाउनु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० पछिल्लोपटक ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसहित प्रतिष्ठित ७ जनाको जीवन समाप्त भयो । यो दुर्घटनाबारे केही अनुमान गर्न भ्याउनु भएको छ ?
–ताप्लेजुङको हवाई दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न अनुभवी नेपाल उड्डयन नागरिक प्राधिकरणका महानिर्देशक हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवसम्म हुनु भएका आदरणीय यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ । अन्य सदस्यहरू पनि उत्तिकै अनुभवी तथा विषय विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहनु भएकाले प्रतिवेदनमा त्यसको यथार्थता बाहिर आउने छ । विभिन्नखाले अनुमानहरू यसमा भइरहेका छन् । त्यसैले यसमा प्राधिकरणले केही कुरा भनीहाल्नु अलि हतारो हुन्छ ।
० उड्डयन क्षेत्रको नियामककारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणचाहिँ यतिबेला के गरिरहेको छ ?
–आईकाओले तोकेको मापदण्ड र आफैंले बनाएका नियमहरू पालना गराउनेतिर लागिरहेका छौं । भएका कमीकमजोरी सच्याउनेतिर पनि काम भइरहेको छ ।
० युरोपियन युनियनले नेपालको आकाशलाई असुरक्षित ठह¥याउँदै लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । यो अविश्वास हटाउन प्राधिकरणले केही गरिरहेको छ कि ?
–युरोपियन युनियनले हामीलाई केही सुझावहरू दिएको छ । हामी आईकाओका सदस्य हौं । त्यसका सिद्धान्त र नियमहरू हामी अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । इयू जस्ता अन्य उड्डयन निकायहरू पनि विश्वमा छन् । तर तिनले भनेका सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तथापि, राम्रो कुरा छन् भने ग्रहण गर्नुपर्छ । युरोपियन युनियनका चासो अनुसार सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ । तर हाम्रो खास चासो भने आईकाओको सिद्धान्त अनुरुप अघि बढ्ने मै केन्द्रित छ ।
० प्राधिकरणले अहिले झेलेका समस्या तथा अपूर्णताहरू के के छन् ?
–सुरक्षाको सवालमा त कसैले कसैसँग सम्झौता गर्ने अवस्था छैन । यसमा हामी गम्भीर छौं । सांगठनिक सुधारको कुरा पनि गरिएको छ । ती कुराहरूको सुधारमा प्रयास गरिरहेका छौं ।
० प्रविधि र इक्विपमेन्टको अभावचाहिँ प्राधिकरणले भोगिरहेको छ कि छैन ?
–म सबैलाई के विश्वस्त पार्न चाहन्छु भने प्रविधि र इक्विपमेन्टका कुरामा हामी गम्भीर छौं । यसमा हामीले कुनै कमी हुन दिएका छैनौं ।
० पूर्वाधारको असुविधा छन् कि ?
–धेरै नै पूर्वाधारहरूको विकास भइसकेको छ । दुर्गमका विमानस्थल पक्की बनाइएका छन् । तराईका विमानस्थलहरूमा काम भइरहेको छ । भरतपुरबाहेकका सबै विमानस्थलमा २४ सै घण्टा उडान गरिरहेका छौं । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । यसले थप हवाई यात्रा सुरक्षित गर्न बल गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।
० केही समयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै बंगलादेश एयरलाइन्सको विमान भयानक दुर्घटनामा परेको थियो । त्यो दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति पनि भयो । तर, त्यसले दुर्घटनापछिको उद्धार र विमानस्थलको औकातबारे अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणमा हामी अलि पछाडि छौं हो ?
–त्यो दुर्घटना आफैंमा अनौठो किसिमको थियो । मौसम र रन वेमा कुनै समस्या नहुँदा पनि ठूलो दुर्घटना भयो । यान्त्रिक गडबडीका विषयमा छानबिन भइरहेको छ । तैपनि दुर्घटना भयो । दुर्घटनापछि गएको फायर भेहिकलले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको सर्वबिदितै छ । कतिपयले बञ्चरोले हानेर उद्धार गरिएको भन्दै आलोचना गरेको पनि सुनियो । तर, फायर भेहिकलमा सबै खालका उपकरण हुन्छन् । र, जे सहज हुन्छ त्यसकै प्रयोग गरिन्छ । त्यही अनुरुप उद्धार टोलीले उद्धार गरेको हो ।
० तर, अझै अत्याधुनिक प्रविधि भएको भए धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो कि ?
–उद्धार कार्य यस्तो हो कि जसमा जतिसुकै राम्रो गरे पनि संसारभर नै प्रश्न चिन्ह उब्जन्छ । त्यसलाई समीक्षा गर्दै पाठ सिकेर आउँदा दिनमा सुधार गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो । तर जहाँसम्म बंगलादेश विमान दुर्घटनापछिको उद्धार छ । त्यसमा फायरका साथीले उद्धारमा निकै कुशलतापूर्वक काम गर्नुभएको थियो । अमेरिकाको फायर एसोसिएसनले त नेपालको फायर टोलीलाई पुरस्कृत नै गरेको छ । तैपनि हामी अझ राम्रो गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।